पारस खड्काको अाक्रमक प्रदर्शन नेपाल मजबुत स्थितिमा – पुरा पढ्नुहोस्……
पारस खड्काको अाक्रमक प्रदर्शन नेपाल मजबुत स्थितिमा
काठमाडौं । विश्व कप छनोट अन्तर्गत अहिले नेपाल र अफगानिस्तान भिडिरहेका छन् । खेलको चौथो अोभरमा नै अनिल शाहलाई पहिलो विकेटको रुपमा गुमाएको नेपाली टिमलाई अहिले कप्तान पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्लले राम्रो खेलिरहेका छन् । अहिले पारस खड्काले निकै अाक्रमक इनिङ खेलिरहेका छन् ।
यो खबर तयार गर्दासम्म नेपालले १२ अोभरमा १ विकेटको क्षति ४५ रन बनाएको छ ।
Prevचीनमा भएको अल्ट्रा म्याराथनमा दुई सय ९३ जनालाई पछि पार्दै नेपालकी सुनमायाले राखिन रेकड
Nextनेपाली सेनाले ल्यायो नयाँ नियम, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले गरे यस्तो घोषणा
काठमाडौँबाट परिवारका लागी के कोशेली लिएर घर फर्के अशोक ? यसरी सम्झीए रुन्ची फ्यानलाई ! (भिडियो सहित)
सारंगी रेट्दै र्याप हान्ने २ भाईको घर पनि रहेनछ ! दाजुभाई भनेर किन ढाँटे ? दाङमै पुग्दा यस्तो देखियो हेर्नूहोस (भिडियो सहित)